Mi Credits ဆိုတာဘာလဲ? Forum Credits ဆိုတာဘာလဲ? အဲ့ဒီ Credits တွေရဲ့ကွာခြားပုံ အသုံးဝင်ပုံတွေကဘာတွေလဲ? | Than Dana
Home » Tools, Tips and Tutorials » Mi Credits ဆိုတာဘာလဲ? Forum Credits ဆိုတာဘာလဲ? အဲ့ဒီ Credits တွေရဲ့ကွာခြားပုံ အသုံးဝင်ပုံတွေကဘာတွေလဲ?
Mi Credits ဆိုတာဘာလဲ? Forum Credits ဆိုတာဘာလဲ? အဲ့ဒီ Credits တွေရဲ့ကွာခြားပုံ အသုံးဝင်ပုံတွေကဘာတွေလဲ?
In Tools, Tips and Tutorials On June 3, 2017
Mi Credits ဆိုတာဘာလဲ ?
အလွယ်တကူရှင်းပြရရင် ဖုန်းတွေမှာ SIM Card တွေကို ဖုန်းပြောလို့ရဖို့၊ အင်တာနက်သုံးလို့ရဖို့အတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်တွေနဲ့ ငွေဖြည့်ပြီးအသုံးပြုရသလိုပါပဲ။ Mi Credits ဆိုတာဟာလည်း Xiaomi MIUI China ROMs တွေမှာ MIUI Themes, Wallpapers, Mi Cloud Storage စသဖြင့် ၀ယ်ယူအသုံးပြုဖို့အတွက် မိမိ Mi Account မှာ Mi Credits Top Up Code တွေနဲ့ ဖြည့်ပြီး သုံးရတာမျိုးပါ။ Mi Credits ဟာ အနည်းဆုံးပမာဏ 10 Mi Credits ကနေစပါတယ်။ ၎င်း Mi Credits များကို ငွေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ MIUI China ROMs အသုံးပြုလျင် ၎င်း Mi Credits နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ Features တွေအသုံးပြုနိုင်ပြီး MIUI Global ROMs တွေမှာတော့ လက်ရှိမှာ Mi Credits နဲ့ မည်သည့် Features ကိုမျှ အသုံးပြု၍ မရနိုင်သေးပါ။
Mi Credits နဲ့ ဘာတွေဝယ်နိုင်လဲ ?
Mi Credits တွေနဲ့ ဘာတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သလဲဆိုတော့ MIUI China ROMs/ MIUI China Themes Store မှာရှိတဲ့ MIUI Paid Themes အလန်းများ၊ Wallpapers အလန်းများ၊ MIUI Themes Fonts အလန်းများ ကိုဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mi Account Features တခုဖြစ်တဲ့ Mi Cloud Storage စသဖြင့် စသည်တို့ကို တိုးချဲ့ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Mi Account တခုစတင်ဖွင့်သည်နှင့် Free Cloud Storage 5GB ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိအနေနဲ့ Mi Cloud Storage 5GB ဖြင့် မလုံလောက်ခဲ့ပါက Mi Credits ဖြင့် ထပ်မံဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ Mi Credits နဲ့ Mi Games, Musics, Videos စသည်တို့ကိုလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို Mi Credits ကို မဝယ်ပဲဘယ်လိုရနိုင်မလဲ ?
Xiaomi ကနေ MIUI Fans များအတွက် MIUI Forum ဆိုတာကိုပြုလုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ Forum က (၂) ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ China Forum (Chinese language ကိုသာအသုံးပြုကြသည်) နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တရုတ်ပြည်ပြင်ပ အခြားနိုင်ငံများက Fans များအတွက် MIUI International Forum ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ MIUI Forum မှာဆိုရင် မကြာခဏဆိုသလိုပဲ Contest (ပြိုင်ပွဲ) လို့ခေါ်တဲ့ Threads လေးတွေကို Forum Administrators များနဲ့ Forum Moderators/ Super Moderators များက ပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်။
အဲ့လို Threads (ပို့စ်) လေးတွေမှာ Contest ရဲ့သဘောကို နားလည်အောင်ဖတ်ပြီး Reply လုပ်လျင်ဖြစ်စေ၊ Contest ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကံကောင်းလို့ Lucky Draw များပေါက်သည်ဖြစ်စေ Mi Credits များ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တခုတော့ရှိပါတယ်။ MIUI International Forum မှာကတော့ နိုင်ငံတကာကလူများအသုံးပြုသည်ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုရမည့်ဘာသာစကားကတော့ (English) အင်္ဂလိပ်လိုသာ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ Mi Credits ကို လက်ရှိမှာ တရုတ်ပြည်မှာသာလျင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ပြန်လည်ရောင်းချပေးတဲ့ဆိုင် အင်မတန်နည်းပါးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Mi Credits ၀ယ်ယူရန်အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက် အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းများကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ Forum Contest တွေမှာ ပါ၀င်ခြင်းနဲ့ Forum Volunteer အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ Special Team Members များအဖြစ် (Super Moderators, Moderators, Alpha Team Members, Beta Team Members, etc… စသဖြင့်ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှလည်း Mi Credits များရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
( Mi Account ဖြင့် Mi Credits အသုံးပြုပြီး MIUI Themes ၀ယ်တာကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် )
( Mi Credits အသုံးပြုပြီး Mi Cloud Storage 20GB/ 1 Year ၀ယ်တာကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် )
Forum Credits ဆိုတာဘာလဲ ?
Forum Credits ဆိုတာ MIUI China Forum/ MIUI International Forum မှာ Forum Members Ranking ကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့ စနစ်တခုအဖြစ်အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်အောင်ရှင်းပြရရင် ယခု ကျွန်တော်တို့ MIUI International Forum မှာဆိုရင် Forum ကို ၀င်အသုံးပြုဖို့ မိမိတို့၏ Mi Account များဖြင့် Login ၀င်ရောက်အသုံးပြုနိုုင်ပြီး Forum သို့ Register ပြုလုပ်ပြီး စတင်ဝင်ရောက်သည်နှင့် Forum Credits 20 ကိုစတင်ရရှိမည်ဖြစ်ကာ Forum Member Rank အနေနဲ့ Junior Member စတင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုမှတဆင့် Forum Credits/ Experience/ Forum Times တို့ တဖြေးဖြေးများလာသည်နှင့်တပြိုင်နက် Forum Members Rank လည်း တက်လာမည်ဖြစ်ကာ ၎င်း Rank မြင့်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် Forum မှာရရှိတဲ့ Attachment File Size များပိုမို ရရှိခြင်း နဲ့ Xiaomi/ MIUI နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ အခြားသော အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Forum Member Ranking ဟာ အနိမ့်ဆုံး Junior Member ကနေ အမြင့်ဆုံး Supreme Member အထိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း Forum Credits တွေက ဒါတွေပဲအသုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ MIUI Forum မှာ Attachment မှတင်ထားတဲ့ Files များကို Download ပြုလုပ်ရာမှာလည်း ၎င်း Forum Credits တွေလိုအပ်ပါတယ်။ Forum Credits မရှိပဲ Forum Attachment Files တွေကို Download ပြုလုပ်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Forum Credits/ Experience မရှိပဲလည်း အပေါ်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ အခြားသော Special Team Members တွေအဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး Forum Experience 50 ရှိမှသာ (Eg; Beta Team Member) အဖြစ် စတင်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခံရမှသာ မိမိဟာ Special Team Members အဖြစ်သို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Forum Credits တွေကို ဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲ ?
လွယ်ပါတယ် MIUI Forum မှာ Active ဖြစ်ပြီး Administrators တွေနဲ့ Moderators တွေတင်တဲ့ ပို့စ်တွေမှာ သာမာန် Users ပို့စ်များထပ် Forum Credits/ Experience တွေ ပိုပြီးများများရတတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရင် စောစောက Mi Credits အခန်းမှာရှင်းပြခဲ့သလို Forum Credits ခပ်များများ တကြိမ်တည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Forum Credits ဟာ ပို့စ်တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ Reply များပေးခြင်း၊ Poll Voting များကို ၀င်ရောက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Reply လုပ်ပါလို့ပြောလို့ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် Thanks, blah blah… etc စသဖြင့် တိုတိုတုတ်တုတ် သွားပြီး Reply လုပ်ခြင်းဟာလည်း Forum စည်းကမ်းအရ Spamming ပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အခန့်မသင့်ရင် Warning ပေးခံရပြီး နားမထောင်ပါက Ban ခံရနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Topics: Forum Credits General Knowledge Mi Credits MIUI Xiaomi
Previous Post Xiaomi မှ USB Type-C အသုံးပြု Earphone ကိုစတင်မိတ်ဆက်
Next Post Xiaomi ဖုန်းအသုံးပြုသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည့် Mi Max2ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အချက် (၅) ချက်